Magazin uru $ 14.99 | Martech Zone
Ọ bụrụ n’ịchọpụtaghị akụkụ akwụkwọ akụkọ na oke ala n’oge na-adịbeghị anya, ị kwesịrị ị were obere oge ma bulie otu Uru Web Kere si Future. Anọla m na-agụ magazin a afọ ole na ole ugbu a, na-ele ya ka ọ jikọtara ma ifuru n'ime ọnwa dị egwu. Nwere ike nweta ndenye aha (ebubata) maka ihe dịka $ 122 / afọ ma ọ bara uru penny ọ bụla.
N'agbanyeghị ma ị bụ onye njikwa azụmaahịa ma ọ bụ onye mmemme, otu mbipụta ọ bụla ga-enweta ozi maka gị. E wezụga isiokwu ndị e biri ebi, mbipụta ọ bụla na-abịa na CD jupụtara na ngwanrọ na nkuzi n'efu.
Nke a bụ ihe atụ nke nnukwu isiokwu sitere na mbipụta June:
You maara na ọ bụ n'ezie iwu na-akwadoghị mee ka websaịtị na-enweghị ike ịbanye na United Kingdom? Anaghị etinye iwu ahụ n'ọrụ, mana n'okpuru Iwu Discrimination Disability, a ga-ekpe ndị azụmaahịa UK ikpe ma ọ bụrụ na enweghị ike ịnweta saịtị ha! Nke a bụ njikọ na nduzi UK. Ihe omuma ozo bu W3C (Mkpokọta Weebụ zuru ụwa ọnụ) ntuziaka.
Iji nchịkọta Google
Na-achọpụta ihe oyiyi maka weebụ
Iji okpokolo agba
Ọnọdụ na CSS
Creatmepụta ọdịnaya dị na Dreamweaver nke enwere ike ịtụgharị ma gbanyụọ
Animating bọtịnụ na Flash
Njikwa ọdịnaya na PHP
Quizzes, kalenda na guestbooks na PHP
Quote ndịna eserese na Photoshop
Na narị narị edemede ndị ọzọ, ndụmọdụ na usoro.
Otu ọnwa gara aga, akwụkwọ akụkọ ahụ nwere ọmarịcha nkọwa dị mkpụmkpụ ma dịkwa ụtọ na akụkọ ihe mere eme nke teknụzụ dị iche iche na ntanetị… XML, PHP, Ruby, .NET, wdg nke dị oke mma na azụrụ m di na nwunye ọzọ ma zigara ha ụfọdụ ndị ọrụ ibe. Nweta magazin a !!! Na ala, ọ na-ere maka $ 14.99 ma kwesiri penny ọ bụla!